Jebinta ereyga sirta ee VBA Microstation - Geofumadas
Jebi sirta ah ee a Microstation Dhaqale VBA
Nofeembar, 2016 Downloads, Microstation-Bentley
Visual Basic for Applications waa taxane maktabado ah oo Microsoft oo diyaar ah, waxoogaa da 'weyn laakiin aad u awood badan gaar ahaan qaybaha Xafiiska ka hor 2010. Inkastoo ay sii socoto, horumar badan ayaa hadda lagu sameeyay gudaha .NET iyo bey'ado kale; xitaa sidaas, horumarinta ku saleysan marcros, VBA waa xal aad u macquul ah iyo in Keeska microse, aad u fudud. Ugu yaraan waxaan xasuustaa ka hadalka arrintan, oo muujinaya khariidad xiran iyo wax la mid ah XFM.
Kuwani waa qaar ka mid ah dhibaatooyinka soo gaadhay aroortan, iyada oo u ordaayo wareega wareega ee Virgin, ee ku yaalla aqalka kulaylaha:
Caawimaadda: Marka aan ordo VBA, fariin ayaa ka muuqda:
«Macluumaadka shatiga ee qaybtan lama helin. Ma lihid xuquuq ku filan shatigaan si aad ugu adeegsato howlahan deegaanka jawiga horumarka. »
Waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu xallin karo dhibaatadan, oo iyaga ka mid ah, ku rakib xirmo ku saabsan shuruudaha microstise sida kuwa ka soo baxay XM. Dhibaatada halkan waa tan, suurtagal markii la isticmaalayo nambarka Windows 8 ama Windows 10, maktabado badan oo qadiimi ah ayaa shaqayn waayay oo hubaalkan VBA waxaa la dhisay ka hor 2010.
Siyaabaha la taaban karo: Ku rakib Visual Basic 2010 Express, tan kumbuyuutarku ma badin doono waxaana lagu darayaa kontaroolka OCX in qof qibrad u leh laga yaabo in uu ogaado oo uu ka soo galo qunsulka.
Waddo suuragal ah download Visual Basic Express waa tan.
Haddii aad rabto inaad ka shaqeyso Microstation Connect Edition, waxay ku xiran tahay in codsigu yahay inuu wax ka beddelo sababta oo ah maktabadaha qaarkood ayaa isbeddelaya.
Si loo sameeyo VBA marcro of Microstation, marka laga hadlayo V8i iyo horaan waxaa lagu qabtaa Mashruuca Dhaqaalaha / Marcro / Mashruuca. Xaaladda Microstation Connect waa inaad doorataa tabaha Utilities ee Ribbon.
Sida aad arki karto, makro ayaa la tooganayaa, laakiin haddii aan rabno inaanu taabanno lambarka wuxuu tusi doonaa daaqada ilaalinta.
Suurtagal ma tahay in la jebiyo erayga sirta ah ee leh VBA?
Nidaamka ilaalinta sirta ah ee Visual Basic for Applications wuxuu raadiyaa inuu abuuro koontarool iyo nabadgelyo horumarineed, sidaas darteed waa inaysan sax ahayn si aad u weydiisato waxyaabahan bogga internetka. Si kastaba ha noqotee, in xalku yahay sababta oo ah waxaan ilaaway furaha ama in farsamada casriga ah ay siisay chikungunya oo ay xireen jiirka, halkan waa xal farsamo oo la isticmaalayo tifaftiraha hexadecimal.
VBA waxaa qaatay shirkadaha soosaara, sidaa daraadeed erayga loo adeegsaday koodhka si loo muujiyo goorta furaha erayga sirta ah loo beddelo hal dalab oo loo beddelo mid kale. Tusaale ahaan, in meesha laga saaro furaha Excel VBA macro caadi ahaan eraybixintu waa DBP = »password", waayo marinka furaha waa DPX = »password". Haddii aan helno xargahaas, oo aan u beddelo wax lamid ah DBR halkii DBP, ama DPR bedelkii DPX, markii la keydinayo, taliska ilaalinta sirta ah mar dambe si fiican looma qori doono vba-ga wuxuu furi doonaa difaac la'aan.
Tani, iyada oo la adeegsanayo Editor Hex, Falanqaynta / raadinta doorashada, waxaan ku qornaa xarafka aan raadineyno, tusaale ahaan BDP, oo leh qoraalka xarafka ah iyo ilaalinta Xaaladda xasaasiga ah ee firfircoon, sida ku cad muuqaalka soo socda.
Isticmaalka Tifatiraha Hexadecimal (Hexad Edit), waxay u badan tahay in la furo macruufka dheellitirka mikrrrrrrrrrrrrsmm ee isbedelkaas adoo raacaya talaabooyinkan:
1 Soo qaado XVI32
Tani waa la soo dejin karaa cinwaankaan; Xaaladdayda, waxaan soo dejisanayaa version 2.55, hooseeyo oo lagu foorarsado zip, waa inaad iska furto oo aad feylisaa xvi32.exe.
2 Furto codsiga mvba.
Waxaa lagu talinayaa in la sameeyo koobi ka hor inta aan la furin VBA. U fiirso sida loo ilaaliyo, halkan waxaad ku arki kartaa dharka. Waa hagaag, dhammaan wixii hadhaa waa in la helo gaaban, marka la helo mid ka mid ah sadexda waraaqood ee lagu beddelay X, oo la badbaadiyey. Taas awgeed, VBA horay u jirtey.
Marka la xirayo arjiga ayaa ku weydiin doona haddii ay badbaadinayaan isbeddellada, waa lagama maarmaan in la tilmaamo haa.
Marka la keydiyo, fiiri markaad fureyso VBA-da oo aadan weydiisan furaha, sidaas awgeed waxay u badan tahay in lagu magacaabo mid cusub. Haddii isticmaalaha furay furaha wali uu ka shaqeynayo shirkadda, waa inaad tagtaa si aad u siisid xawaash yar oo madaxa ah ama ugu yaraan ku qasbi karo inuu bixiyo jajabkii jimcihii; Haddii uu ku geeriyoodo chikungunya, waxaan sameynaa daqiiqad kale oo aamusnaan ah.
Raadinta ereyada loogu talagalay VBA ee Microstation (MVBA), waxay u muuqataa inay tahay xeeladda ku xigta. Ma aha wax la mid ah Excel ama Access laakiin dadaalka dareenka caadiga ah iyo sabirka waxaad ka heli kartaa.
Saving macnaheedu ma in aan ogaado sirta ah awood, waxaan ku siin doonaa gaabinta silsiladda beddelkeeda iskaashi ah calaamad. Dabcan, waxaa jira had iyo jeer waa mujrim ah ama guusha, waa in si XD biilka. Waayo, in aad iibsato download ah Kaarka amaahda ama Paypal.
Post Previous«Previous Microstation CONNECT Edition - lagama maarmaan noqon doona in ay la qabsadaan si interface cusub
Post Next Allplan: 4 2017 balanqaaday bilowgii cusubNext »
Hal Jawaab "Jebinta sirta ah ee Microstation VBA macro"
Felix Falconi isagu wuxuu leeyahay:
Diseembar, 2019 at
Xaaladdayda, ma doonayo inaan jebiyo, tirtiro ama burburiyo, erayga erayga 'vba password', waxa aan doonayaa waa inaan i ogeysiiyo ama aan xasuusto erayga sirta ah. Ma taqaanaa qaabka uu qaabku ahaan lahaa?